संकटमा ‘ए’ डिभिजन लिग, च्यासलका दुई खेलाडीलाई कोरोना - MeroKhelkud
२०७८ पुष ३० गते २०७८ पुष ३० गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर608LeaveaComment on संकटमा ‘ए’ डिभिजन लिग, च्यासलका दुई खेलाडीलाई कोरोना
काठमाडौं । सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको च्यासल युथ क्लबका दुई खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । च्यासलका सहायक प्रशिक्षक आशिक थापा मगरले गोलकिपर प्रदिप भण्डारी र डिफेन्डर कमल श्रेष्ठलाई कोराना पुष्टि भएको बिहिबार नवौं चरणका खेलअघिको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् ।
यसअघि च्यासल युथ क्लबले आठौं चरणको खेल पोखरामा खेलेको थियो । जहाँ, च्यासलले मनाङ मर्स्याङदी क्लबसँग ५–० को पराजय भोगेको थियो । पोखराबाट काठमाडौं फर्किए लगत्तै प्ररीक्षण गर्दा दुई खेलाडीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । दुवै खेलाडी टोलीका नियमित सदस्य हुन् ।
यस्तै, जावलाखेलका प्रशिक्षक किशोर केसीले आफ्ना ९ खेलाडी रुघाखोकीले ग्रसित भएर प्रशिक्षणमा नआएको बताए । गोलकिपरसहित चौध खेलाडी मात्र प्रशिक्षणमा उपस्थित रहेको उनले जानकारी गराए ।
‘विहानी अभ्यासमा गोलकिपर सहित चौध जनालाई मात्र अभ्यास गराएँ, ९ खेलाडीमा रुघाखोकीको समास्या छ । मौसमका कारण मलाई पनि समस्या छ । अर्को खेलसम्म खेलाडी फकन्छन् ।’ लिगमा नवौं चरणका खेलहरु शुक्रबारबाट सुरु हुनेछन् ।
एट्लेटिकाेमाथि राेमाञ्चक जित निकाल्दै एथलेटिक क्लब बिल्वाओ फाइनलमा
रोमाञ्चक बन्यो गोल्डेन बुटको दौड ! रोनाल्डो सबैभन्दा अगाडि, कसले जित्ला त ?
यी हुन युरोकपमा आज बुधवार हुने ३ खेल, कुन खेल कति बजे ? कसरी हर्ने लाईभ ?
जोर्डनसँग नेपाललाई बदला लिने अवसर, के बलियो प्रतिद्वन्द्वीसामु नेपालको जित संम्भव छ ?